Locale Fix (Region Fix) for Global ROM – Xiaomi Guide
China rom ကနေ Global rom ကိုချိန်းရင် Boot Loader Unlock မလုပ်ထားရသေးသူတွေက EDL ကနေ firmware ရေးပါတယ်.. အဲသည်အခါမှာ Global rom ဆိုပြီး Locale (Region) အစုံပါရမယ့်ဟာ မပါတော့ပဲ China Only ပဲဖြစ်သွားပါတယ်။ Myanmar (Burma) Region ရွေးမရ.. Fonts ရွေးဖို့နေရာမပေါ် ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော Mi Phone model တွေမှာပါ။ သည် post ရည်ရွယ်ချက်က firmware ရေးချိန်မှာ လိုအပ်တဲ့ file လေးတွေ အလုပ်လုပ်ပုံရယ်၊ Global Rom မှာ Region ချိန်းမရတဲ့ကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ဆိုတာလေးကို သိစေချင်တာပါ။
Fastboot rom file ကိုဖြည်လိုက်ရင် Firmware Folder ရပါမယ်။ အဲသည်အောက်မှာ file လေးတွေ တွေ့ပါမယ်။ Windows Computer တွေမှာ Firmware ရေးရင် block တွေရေးဖို့ ညွှန်ကြားချက်တွေပါတာက bat file လေးတွေပါ။ sh file တွေက Linux Computer တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ file တွေပါ။ ဘယ်သူမှလဲ အဲသည်မှာတင်လေ့မရှိပါဘူး။ အဲသည် bat file လေးတွေညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တင်ဖို့က ဖုန်းက Boot loader unlock လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေရပါမယ်။ ဖုန်းကို Fastboot Mode ထဲဝင်ပြီး firmware ရေးရပါတယ်။
အောက်ပါပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ BLU ပြီးလို့ Fastboot Mode ကနေ firmware တင်ရင် Mi Flash Tool ကလိုအပ်မယ့် bat file လေးတွေပါ။
flash_all.bat (ပုံထဲမှာတော့ ဖျက်ထားသည့်အတွက်မပါပါ။ ပုံမှန် firmware zip ဖြည်ချတိုင်း အဲသည် file ကပါပါတယ်) ကတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဖုန်းကို All Clear ဖြစ်ချင်လို့တင်ချိန်မှာသုံးတာပါ။ Flash Tool Option ထဲမှာ Clean All ဆိုတဲ့ option လေးကိုရွေးပေးထားရင်သုံးပါတယ်။
flash_all_except_storage.bat ကတော့ firmware ပိုင်းကို clear ဖြစ်အောင် တင်သွားမယ်။ ဖုန်း Internal Storage ထဲမှာရှိနေတဲ့ ကိုယ့် photo, video, documents စတာတွေ မပျက်အောင် တင်ချင်တဲ့အခါသုံးတာပါ။ Flash Tool မှာ Save User Data ဆိုတဲ့ option ကိုရွေးပေးထားရင် အဲသည် bat file ထဲက ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းရေးပါတယ်။ (flash_all.bat ထဲက userdata.img ရေးတဲ့ command line ကိုဖျက်ပေးထားလိုက်ရင်လဲ သည် file ထဲကဟာတွေနဲ့ တူတူပါပဲ။) သည်ဟာက လက်ရှိ China Stable ကိုတင်ထားရင် လက်ရှိနဲ့ MIUI Version တူတဲ့၊ မြင့်တဲ့ China Stable ကိုပဲတင်ချိန်မှာသုံးသင့်ပါတယ်။ ROM type မတူရင် မသုံးသင့်ပါ။ (ဥပမာ လက်ရှိတင်ထားတာ China Stable.. Flash tool နဲ့ ပြန်တင်မှာက Global Stable လိုမျိုး.. အဲလိုအခြေအနေမှာတင်ရင် ဖုန်းက Home Screen ထိမရောက်ပဲ boot loop ဖြစ်နေနိုင်ခြေပဲပိုများပါတယ်။ Clean All ကိုသာသုံးသင့်ပါတယ်။)
flash_all_lock.bat ကတော့ ဖုန်းထဲကဟာတွေလဲ အကုန်ပျက်အောင်၊ clean ဖြစ်အောင် firmware ကိုတင်မယ်။ ပြီးရင် Boot Loader ပါ lock ပြန်လုပ်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်ပါတဲ့ bat file ပါ။ Flash Tool Option ထဲက clean all and lock ဆိုတာကို ရွေးပေးထားချိန် သည်ဟာအလုပ်လုပ်တာပါ။ ဘယ်သူမှတော့ BLU ပြိးသားဖုန်းကို firmware တင်ပြီးတာနဲ့ lock ဖြစ်အောင် မလုပ်ပါဘူး။ တစ်ခုသတိထားဖို့လိုတာက Flash Tool က စစချင်းဖွင့်သုံးချိန် ရွေးထားတာ clean all and lock ပါ။ အဲသည်နေရာ clean all or save user data ကို ပြောင်းပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။ (flash_all.bat file ထဲမှာ နောက်ဆုံး reboot command မတိုင်ခင် fastboot oem lock command လေးထည့်ပေးထားလိုက်တာ သည် file ထဲဟာတွေနဲ့ တူတူပါပဲ)
EDL Mode ကနေ firmware တင်တာမှာတော့ Firmware Folder အောက်က file တွေ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အလုပ်မလုပ်ပါ။ Firmware Folder အောက်က images folder အောက်မှာအောက်မှာရှိတဲ့ xml file တွေညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ rawprogram0.xml ပါ။ Mi Flash Tool ကတော့ သူရေးရမယ့် file တွေကိုရှာဖို့ Firmware Folder ထိပဲရွေးပေးထားပေမယ့် သူ့ tool၊ သူ့ rom ဆိုတော့ သူ့ဟာသူ images အောက်မှာ လိုတာတွေရှာပြီးရေးပါတယ်။ အခြား Tools တွေနဲ့ EDL Mode ကနေတင်ချင်ရင်ကတော့ လိုအပ်တဲ့ file တွေ အကုန်ရှိနေမယ့် Firmware Folder အောက်က images folder ထိရွေးပေးထားရပါမယ်။ အောက်ပါပုံလေးတွေ အတိုင်းရွေးထားတာကိုပြောတာပါ။
Boot Loader Unlock လုပ်ပြီးလို့ Fastboot mode ကနေ firmware ရေးတဲ့အခါမှာ Region ရွေးမရတာ မဖြစ်ပါ။ bat file တွေထဲမှာ cust.img ကိုရေးတဲ့ command ပါပါတယ်။ အဲသည်အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ EDL Mode ကနေ firmware တင်တဲ့အခါမှာတော့ အချို့ model တွေအတွက် rawprogram0.xml ထဲမှာ cust.img ကိုရေးခိုင်းတာမပါပါ။ အဲဒါကြောင့် Region ရွေးမရတာ ဖြစ်တာပါ။
ပထမတစ်နည်း က Firmware မရေးခင်ကတည်းက Mi Flash Tool က လိုအပ်မယ့် xml file မှာ ပြင်ပေးလိုက်တာပါ။
Firmware Folder အောက်က images folder အောက်က rawprogram0.xml file ကို Notepad++ လို text editor မျိုးနဲ့ဖွင့်ပါ။
lable=”cust” လို့ပါတဲ့နေရာလိုက်ရှာပါ။ အောက်ဆုံးနားလောက်မှာတွေ့ပါမယ်။ သူ့ရှေ့မှာ filename=”” ဆိုပြီးဖြစ်နေတာမျိုးတွေ့တတ်ပါတယ်။
“” နှစ်ခုကြား cust.img လို့ရေးထည့်ပါ။ “” နှစ်ခုကြားဖြစ်ရပါမယ်။
ပြီးရင် rawprogram0.xml file ကို save လိုက်ပါ။ Firmware ရေးတာ လုပ်နိုင်ပါပြီ။
ဒုတိယတစ်နည်း ကတော့ firmware ရေးပြီးမှသိလို့ emmcdl command နဲ့ နောက်မှ cust.img ကိုလိုက်ရေးထည့်တာပါ။
လိုအပ်တဲ့ emmcdl.exe file လေးကို download လုပ်ပါ။ images folder အောက်မှာကူးထည့်ထားပါ။
Download emmcdl.exe file
Files, Folder တွေလွတ်နေတဲ့နေရာ Shift Key + Right Click နှိပ်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ Shortcut menu က Open Command Windows Here ကိုရွေးပါ။ (ကျနော့် SS က Windows 10 Update လုပ်ထားလို့ Open Power Shell…. ဆိုပြီးပေါ်နေတာပါ။ စိတ်ထဲမထားပါနဲ့။ အတူတူပါပဲ)
ဖုန်းကို EDL Mode ဝင်ပါ။ ကွန်ပျူတာမှာ USB Cable နဲ့ချိတ်ပါ။ ဘယ် COM Port မှာအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတာ အရင်စစ်ပြီး မှတ်ထားပါ။ အောက်ပါပံဲုက command အတိုင်း emmcdl -l လို့ရိုက်စစ်ပါ။
cust.img ကိုရေးခိုင်းပါ။ -f နောက်မှာထည့်ပေးရမယ့် programmer file ရယ်၊ cust.img ရယ်က ကိုယ်ဖြည်ချထားတဲ့ firmware folder ရဲ့ images folder အောက်မှာရှိနေပါလိမ့်မယ်။ emmcdl -p COM3 -f prog လောက်ထိရိုက်ပြီး TAB Key နှိပ်ရင် programmer file name အကုန်သူ့ဟာသူပေါ်လာပါမယ်။ COM နံပါတ်ကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကွန်ပျူတာကသိနေတာတူမှာမဟုတ်ပါ။ ကျနော့်ဆီမှာ COM3 မို့ COM3 လို့ရိုက်တာပါ။
အချိန်အနည်းငယ်ကြာရင် Success ပြလို့ပြီးသွားပါမယ်။ ဖုန်းကိုဖြုတ်၊ Reboot နိုင်ပါပြီ။ Region ရွေးဖို့တွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Region ရွေးစရာပေါ်လာအောင်လုပ်တာက Global ROM တွေအတွက် Themes ထဲမှာ Fonts ရွေးစရာပေါ်လာအောင် လုပ်တာတစ်ခုလောက်ပဲရှိပါတယ်။ အခုလိုတွေ ရေးမနေချင်ရင်လဲ Quick Shortcut Maker app လေးသုံးပြီး Font Shortcut ထုတ်ထားလိုက်ရင်လဲ Font ရွေးတာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်။ ရွေးဖို့ Font mtz တွေထည့်တာကတော့ မိမိနှစ်သက်ရာ font ပုံစံလေးတွေ mtz လုပ်ပေးထားတာတွေကို download လုပ်ပြီး သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ လိုတဲ့အချိန်သုံးနိုင်ပါတယ်။ MIUI Theme Editor app လေးအကူအညီနဲ့ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ကျနော့် blog ထဲက Myanmar font နဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တွေမှာ ကိုယ်လိုချင်တာတွေ၊ လုပ်နည်းတွေ ရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Published in Firmware, Mi Flash Tool and Other Tools